I-chalet entsha **** - 6/8 abantu - emazantsi emithambeka
Indlu yeholide eyakhiwe ngamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguSéverine
ILe "Bisolet" yindawo ye-chalet eyahlaziywa ngo-Okthobha ka-2020 eLa Clusaz, ibekwe kwindawo efanelekileyo emazantsi emithambeka: ebusika, ungaya kwi-skis ukuya kwi-ski lifts (malunga ne-50m)! Ukusuka kule massif, unokufikelela kuzo zonke ezinye ii-massifs zaseLa Clusaz, kunye nekhephu; ezinye iingenelo: i-ofisi yetikiti kunye nezifundo ze-ESF phantsi kwe-chalet, i-slope eluhlaza ekhokelela ezantsi kwidolophana kunye neevenkile zayo.
ILe "Bisolet" yindawo ye-chalet eyahlaziywa ngo-Okthobha ka-2020 eLa Clusaz, ibekwe kwindawo efanelekileyo emazantsi emithambeka: ebusika, ungaya kwi-skis ukuya kwi-ski lifts (malunga ne-50m)! Ukusuka kule massif, unokufikelela kuzo zonke ezinye ii-massifs zeLa Clusaz: ngaphezu kwe-125 km ye-slopes (i-210 km kunye nommandla we-Aravis, i-85 slopes), kunye ne-snowpark; ezinye ii-asethi ezingaqhelekanga: ibhokisi ye-ski pass phantsi kwe-chalet, kunye neqela le-ESF kunye nezifundo zangasese, i-slope eluhlaza ekhokelela kwidolophana kunye neevenkile zayo.
I-chalet inegadi ene-terrace kunye nomlambo omhle kwindawo ekufutshane. Ehlotyeni, yonke imisebenzi onokuyicingela iyafumaneka eLa Clusaz; emva kosuku lwe bexhamla ukunyuka intaba, ukuhlola okanye siqubha Lake Annecy imizuzu engama-40 ukusuka La Clusaz, uyakhululeka egadini okanye kwigumbi ephilileyo elikhulu apho indalo na esemandleni zonke izimvo.
Le chalet ingahoywanga ibekwe kwindawo entle ye-Etale massif, ngakumbi ezolileyo, inombono we-panoramic weentaba, inika imvakalelo eyodwa yokuzola.
3 amagumbi okulala anokuhlala ukuya kuthi ga kwi-8 abantu:
Kumgangatho ophantsi: isango lokungena elinempahla yokunxiba kunye nesihlangu sombane / isisomisi seglavu.
2 okulala ezizimeleyo ngamnye window bay kunye nokufikelela ngaphandle kwi ithala iimbono ntaba, 1 ukhuko kabini 140 kwisifundo ngasinye kwaye ezinkulu iikhabhathi kunye ngubo; 1 lokuhlambela ngetawuli dryer, kwishawa yangasese, kumatshini wokuhlamba impahla, isomisi impahla ...
Kumgangatho 1: enkulu igumbi lokuhlala evulekileyo ka 45 m2 ngakhanyi kakhulu nembono intaba kuquka igumbi lokuhlala, isitovu ukufudumeza phezulu, ikhitshi enkulu American (eziko, induction Isitovu, microwave, njengesicocisi - Fondue kunye umatshini raclette), udla indawo nge Iitafile ezi-2 eziphezulu (ithuba lokunamathelisa ezi tafile zimbini ukwenza umthamo omkhulu wabantu abayi-8-10).
Ifestile enkulu yepanoramic bay. I-balcony enkulu yokuwela ngokujonga iintaba.
On the 2nd floor: a elikhulu, eqaqambileyo, cocooning isithuba yokugcina le yokugcina impahla iimboniselo ntaba, 4 iibhedi enye ye-80 (ithuba wokujoyina ukuba benze-2 iibhedi kabini ka 160) kunye lokuhlambela kunye yokuvasa kunye yangasese, oyinto indawo ehlanganisa kunye nokuphumla kubantwana kunye nolutsha (Isikrini esiseFlethi esinoqhagamshelo lwe-wifi)
Indawo yokupaka yabucala :
Emazantsi e-chalet, unendawo yokupaka iimoto ezi-2 (ezingagqunywanga) + ipaki enkulu yasimahla phakathi kweemitha ezingama-30 ukuba kuyimfuneko.
Igumbi langaphandle le-ski phantsi kwebalcony.
Isihlangu kunye nesomisi seglavu kwiholo yokungena ye-chalet
I-Luge iyafumaneka (imihlakulo)
Sithetha isiFrentshi, sikwathetha nesiNgesi, hablamos espanol, und wir verstehen deutsch.
Wamkelekile akhaya !
4.71 · Izimvo eziyi-8
I-chalet ikwi-2.8 km ukusuka kumbindi welali: iivenkile ezininzi zokutya kunye nezixhobo. Imisebenzi ekhoyo: Idama lokuqubha (eligqunywe ngesiqingatha, i-spa, i-hammam, i-jacuzzi), i-toboggang yasehlotyeni, ibhayisekile yeentaba kunye nokuqesha ibhayisekile yombane yasezintabeni, ukukhwela ihashe, ukutyibiliza inja ...
Ukusuka kwi-Etale massif, phantsi kwe-chalet, unokufikelela kuzo zonke ezinye i-La Clusaz massifs kwi-skis (iphakheji efanayo). Iqela le-ESF kunye nezifundo zangasese phantsi kwe-chalet.
Indawo ye-ski enqumlayo kwi-Croix Fry imizuzu eyi-10 ngemoto.
Ukubanakho ukuhamba ngekhephu ukusuka kwi-chalet ukuya kwiCol des Aravis.
Ivenkile yokuthengisa, izixhobo zokurenta kunye nemidlalo yokuzonwabisa 400m ukusuka kwi-chalet.
Umbuki zindwendwe ngu- Séverine
Siya kukuvuyela ukukwamkela kwi-chalet yethu yaseSavoyard. Ukwazi indawo kuyo yonke i-nook kunye ne-cranny, singakwazi, ukuba unqwenela, ukukwazisa ngokuchanekileyo ngayo yonke imisebenzi ekufuneka yenziwe kwisiza. Sisemandleni akho ukuxoxa nge-imeyile okanye ngefowuni.
Siya kukuvuyela ukukwamkela kwi-chalet yethu yaseSavoyard. Ukwazi indawo kuyo yonke i-nook kunye ne-cranny, singakwazi, ukuba unqwenela, ukukwazisa ngokuchanekileyo ngayo yonke imi…
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-R27281
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- La Clusaz